कांग्रेस नेकपा कार्यकर्ताबीच झडपमा गोली चल्यो,१८ घाइते « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
कांग्रेस नेकपा कार्यकर्ताबीच झडपमा गोली चल्यो,१८ घाइते
सर्लाही, १५ असार । सर्लाहीमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा १८ जना घाइते भएका छन् ।
सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा गए राति भएको झडपमा दुर्वैतर्फका गरी १८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये केहीलाई गोली समते लागेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा एक साताअघि नेकपाका एक कार्यकर्ताको हत्याको घटनालाई लिएर नेकपाका युवा विद्यार्थीले आइतबार सर्लाहीका विभिन्न ठाउँमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए ।
धनकौलमा भएको जुलुसकै क्रममा दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच विवाद हुँदा झडप भएको हो । घाइते हुनेमा १५ जना कांग्रेस र तीन जना नकेपाका कार्यकर्ता रहेका प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्न एक जनालाई पक्राउ गरिएको सर्लाहीका एसपी विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
तर, पक्राउ परेकाको नाम भने उनले खुलाएनन् । ‘अहिले स्थिति सामान्य छ, कुनै तनाव छैन,’ उनले भने । घटनामा गोली चलेको एसपी पोखरेलले पुष्टि गरेका छन् । ‘केहीलाई गोलीको छर्रा लागेको छ, तर गम्भीर घाइते कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘कुन पक्षबाट गोली चलेको हो, खुलेको छैन । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
नेकपा कार्यकर्ताले कांग्रेस कार्यकर्ताले गोली चलाएको आरोप लगाएका छन् । रामनगरका नेकपा कार्यकर्ता ६० वर्षीय रामजल रायको एक साताअघि हत्या भएको थियो । रायको हत्या कांग्रेस कार्यकर्ताले गरेको दाबी नेकपाको छ । तर, कांग्रेसले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यादवको शव अझै सर्लाही जिल्ला अस्पतालमै छ । हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न नेकपाले माग गरेको छ । नेकपा सर्लाहीका जिल्लास्तरीय नेताले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर घटनाको विषयमा जानकारी समेत गराइसकेका छन् ।
काभ्रेका खरेल र बादे गणेशमान सिंह प्रजातन्त्र सेनानीबाट सम्मानित
धुलिखेल, २५ असारः गणेशमान सिंह फाउण्डेसनले नेपाली काँग्रेसका नेताह? काभ्रेबासी राजेन्द्र खरेल र गोपालदास बादेलाइ
नेकपाको एकता जोगाउन जनवर्गीय संगठनको ज्ञापनपत्र
बनेपा २४ असार : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादलाई लक्षित गरी पार्टी समर्थित जनवर्गीय
मदन भण्डारीको सिद्धान्त अविचलित अघि बढी रहन्छ : पूर्व मन्त्री बाँस्कोटा
धुलिखेल, १४ असारः पूर्व सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मदन भडारीको सिद्धान्त अविचलित अघि